चुनौतीपूर्ण बन्दै क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ चैत्र ३०, सोमबार ०८:४१ गते
भूकम्पपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा पहरी एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरान चौरमा एकीकृत बस्ती, महोत्तरीको बर्दिवासमा मुसहर बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसकेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ठूलो परियोजनाको उदघोष गरेर चितवनको रामपुरमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न आफ्नो श्रम, सीप, ख्याति, सम्पत्ति लगाउन पुगेको छ ।
नेपालमा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने गरेको छ । सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त रहेकाले यस रङ्गशालाको विकल्प खोजिन थालेको धेरै समय भए पनि मूर्तरुप लिएको थिएन । त्रिवि मैदान र मुलपानी मैदानका अलावा पोखरा, बारा, वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, कोहलपुर र धनगढीमा क्रिकेट मैदान भए पनि ती अन्तराष्ट्रिय रङ्गशालाको रुपमा छैनन् ।
एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीले आफ्नै देशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशालामा खेल्ने सपना सार्थक बनाउने सोचका साथ लागेका छन्, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका संयोजक एवं हास्यकलाकार सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे । चितवनमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा बनाइरहेको क्रिकेट रङ्गशालाले समाजसेवाका लागि धेरैलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकासँग २०७५ माघ १६ गते बुधबार औपचारिक सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सुरू गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्र्रािष्ट्रय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका–१५, रामपुरको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा उक्त रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको हो ।
भरतपुर र चितवनको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढबाट पश्चिम आठ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि रङ्गशाला निर्माणस्थल पुगिन्छ । रङ्गशालालाई खेलकुद एकेडेमी बनाउने गरी काम जारी रहेको र लागत चार अर्ब लाग्ने फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
रङ्गशाला एक लाख ५४ हजार पाँच सय ६ वर्गमिटरमा कमलको फूल आकारको संरचनामा बन्नेछ । नेपाली मौलिकताले सजिसजावट हुने रङ्गशाला विश्वमै नमुना बन्ने र अन्तर्र्रािष्ट्रय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)का सम्पूर्ण मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको प्रवेशमै पानीमाथि गौतमबुद्धको ठूलो आकारको मूर्ति देखिनेछ । वरिपरि नेपालको पहिचान झल्कने जनावरसमेत रहनेछन् । झ्यालढोकामा मल्लकालीन कला झल्कनेछ । क्रिकेट खेललाई प्राथमिकतामा राखी पाँच पिच हुनेछन् । ३० हजार दर्शक अट्ने क्रिकेट रङ्गशालासहित अन्य खेलहरु पनि गर्न मिल्ने बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला बन्दैछ ।
रङ्गशाला कमलको फूल आकारको हुनेछ । बहुउपयोगी हुने यो रङ्गशालाभित्र फुटबल, भलिबल बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, फिटनेस सेन्टरदेखि डन्डीबियोसम्म खेल्न सकिनेछ । २० बिघा ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने ३० हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा ४ प्रवेशद्वार रहनेछन् । रङ्गशालामा क्रिकेटका अलावा अन्य खेलकुद आयोजना गर्नयोग्य रहने फाउन्डेसनले बताएको छ । रङ्गशालासँगै २ छुट्टै अभ्यास मैदानसमेत हुनेछन् । यस्तै, क्रिकेट एकेडेमीसहितको बन्न लागेको रङ्गशाला परिसरमा फुटबल, स्वीमिङ, बास्केटबल, भलिबल, डन्डीबियो, टेवलटेनिसलगायतका खेल मैदान रहनेछन् ।
पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत यो प्रभावकारी हुनेछ । औँसीको रातले पनि नछेक्ने गरी रात्रिकालीन खेल खेलाउन मिल्ने गरी रङ्गशाला क्षेत्र प्रकाशमय हुनेछ । नेपालको मौलिकतासहित निर्माण हुन लागेको रङ्गशाला स्तुपा आकारको हुनेछ भने क्रिकेट मैदान फुलेको कमल फूल आकारको हुनेछ । बाहिरी भागमा नेपाल चिनाउने सम्पदाहरु समावेश गरिने छ । आउँदो २५ वर्षपछि हुने प्रविधि अहिले नै प्रयोग गरेर नक्साङ्कन गरिएको छ ।
नेपालले क्रिकेटमा एकदिवसीय खेलको मान्यता पाएसँगै स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको माग भएपछि देशविदेशमा रहेका नेपालीसँग सहयोग जुटाएर भूकम्पपछि बस्ती पुनर्निर्माणको अनुभव बटुलेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले साढे तीन अर्ब लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन जुटेको थियो । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दाजस्तै सहयोग जुट्ने अपेक्षा फाउन्डेसनले गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार सहयोग रकम जुटेको छैन ।
रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका धुर्मसलाई पछिल्ला दिनमा आर्थिक संकटले निकै सताउन थालेको छ । रङ्गशाला निर्माणमा बजेटको अभाव हुँदा न उनले सोचेजसरी कामलाई अघि बढाउन सकेका छन्, न रकमको जोहो हुने निश्चित स्रोत छ । बजारबाट ल्याएको सामानको पैसा तिर्न मुस्किल परेको छ । उधारो नतिर्दासम्म आपूर्तिकर्ताले थप सामान नदिने अवस्था छ । डिपिआरअनुसार तीन अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको रङ्गशाला निर्माणको झन्डै ३३ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ । हालसम्म ४४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । ५० करोड कबोल रकम उठ्न बाँकी छ । फाउन्डेसन अहिले करिब १२ करोड ऋणमा छ । महायज्ञबाहेक रङ्गशाला निर्माणका क्रममा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले सहयोग घोषणा गरेको रकम चार करोड रूपैयाँ हाराहारी उठ्न बाँकी छ । रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका मजदुरलाई रकम दिन गाह्रो हुन थालेको छ ।
आर्थिक सङ्कट बढेपछि मेची–काली यात्रा र रङ्गशाला सफारी यात्रा सुरू गरिएको छ । यो आर्थिक सङ्कटपछि धुर्मुस–सुन्तलीलाई सहानुभूति दिनेहरुभन्दा खुच्चिङ भन्नेहरुको संख्या बढेको छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन महायज्ञ गर्ने धान्याचल समितिको स्मारिकामा उल्लेख भएअनुसार महायज्ञमा गएर बोल्ने तर वर्षदिनसम्म रकम नदिनेमा सरकारी निकायका प्रमुख, सांसद् र ठेकेदारसम्म छन् ।
भविष्यमा भारत र पाकिस्तानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको खेल खेलाउने सपनासहित बन्दै गरेको प्रस्तावित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हिजो जुन हर्षोल्लासका साथ चितवनका स्थानीयवासीसँगै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरुले अबिर जात्राका साथ स्वागत गरेका थिए, हाल त्यसमा शङ्का र उपशङ्काको वातावरण बनेको छ ।
अहिलेको देशको अवस्थालाई हेर्दा यो काम आवश्यक नभएको टिप्पणी धेरैको छ । राज्यको आफ्नो पहल र प्रत्यक्ष लगानीको काठमाडौँ मूलपानीमा बन्दै गरेको दशकअघिको स्टेडियम करिब करिब बेवारिसे र अधकल्चो भएको बेला त्यताको मूल्याङ्कन नगरी चितवनमा निर्माण सुरू गर्नु कति जोखिम र भारको विषय हो, लेखाजोखा भएन । अहिलेको अवस्थामा चार अर्ब रूपैयाँ लागतको क्रिकेट रङ्गशाला देश र जनताको प्राथमिकतामा पर्दैन, त्यो पनि विश्वविद्यालयको जग्गा मासेर । कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा मासेर क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनमा कसको स्वार्थ लुकेको छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहँदा कतै सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे राजनीतिक षड्यन्त्रको गोटी त भइरहेका छैनन् ? भन्ने आशङ्काले पनि चन्दा नउठेको हुन सक्छ ।
रङ्गशाला बनाउने योजना ल्याएलगत्तै कतिपय मिडियाहरुले विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी कुरा उठाएका थिए । तारा बरालले अझै पनि यिनै विषयवस्तुहरु उठाएर बजार तताइरहेकी छन् । रङ्गशालाले खेल क्षेत्रको मात्रै विकास गर्दैन । रङ्गशाला बन्दा व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । के यी सबै उपलब्धिले रङ्गशालाको विरोध गर्नेहरुको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै हानि गर्छ ? गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय रङ्गशाला हाम्रो शान हो, हाम्रो भविष्य हो, नेपाल र नेपालीको गौरव हो ।
त्यतिबेला धुर्मुस–सुन्तलीले ख्याल गर्नुपथ्र्यो, सरकारले पनि ध्यान दिनुपथ्र्यो । क्रिकेट रङ्गशाला आमनागरिकहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने भएकोले आवश्यक चार अर्ब रकम कसरी जुट्ला ? भन्नेतर्फ धुर्मस–सुन्तली त्यतिबेलै सचेत हुनुपथ्र्यो । यस्ता ठूला योजनाहरु आमनागरिकहरुको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरुले राख्नुपथ्र्यो । तर, रङ्गशालाको निर्माण आधाआधी सम्पन्न भइसकेकोले सक्नेले सक्दो सहयोग गरी कुनै पनि हालतमा पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ ।
एउटा ख्यातिप्राप्त कलाकारले देशका लागि काम गर्नु र खेल क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक काम गर्नु निश्चय नै असहमतिको कुरा होइन, तर दूरगामी प्रभाव पार्ने काम र निर्णयका बारेमा फैसला गर्दा भावनाभन्दा यथार्थलाई सहारा लिनु बेस हुन्छ । स्टेडियम निर्माणको हतारोले धुर्मुस–सुन्तलीका लागि आज अत्यन्तै असहज स्थिति पैदा भएको कुरा घामजत्तिकै छलङ्ग छ । यद्यपि, लत्तो छोड्ने र परियोजना त्याग्ने स्थिति होइन तर एक कलाकारको उर्वर समयमा विलम्ब भएको र अनेकन झमेला, तनाव र समुचित वातावरण नपाउनु दुर्भाग्यको भने विषय हो ।
त्यसो त, क्रिकेटका रङ्गशालाहरु बनाउन आर्थिक लगानी गर्नै नहुने भन्ने पनि होइन । देश विकासका लागि खेलकुद क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ । क्रिकेट रङ्गशाला पनि आवश्यक छ, तैपनि देशमा हुने खेलकुदका गतिविधिप्रति ख्याल राख्नैपथ्र्यो । हाम्रो देशमा कतिवटा क्रिकेटका कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरु हुने गरेका छन् ? त्यसको पनि लेखाजोखा गरिनुपथ्र्यो । चन्दा उठाएर समाजसेवा हुँदैन, विवादमात्रै हुन्छ भन्नेतर्फ धुर्मुस–सुन्तलीले ख्याल गर्नुपथ्र्यो । ३० हजार दर्शक क्षमताका लागि चार अर्ब खर्च गरेर क्रिकेटको रङ्गशाला बनाउन अहिलेको अवस्थामा चन्दा उठाएर सम्भव छ र ? भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै खडा भएको हो ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको जमिनको साटो भरतपुर महानगरले रामपुरभन्दा पनि धेरै भित्र भीमनगर क्षेत्रमा जम्मा १५ बिघा जमिन दिने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ, तर जुन जमिन भरतपुर महानगरले देखाएको छ त्यो जमिन आफैँमा विवादित प्रकृतिको रहेको बुझिन्छ । ४/५ बिघा जमिनमा सानो र चिटिक्कको रङ्गशाला बनेमा भोलि दीक्षान्त समारोह हुँदै गर्दा हजारौँ विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र प्राध्यापक सहभागी हुँदा आवश्यक नै पर्ने र समय–समयमा विश्वविद्यालयभित्र हुने खेलकुद गतिविधिका लागि पनि रङ्गशालाको आवश्यकता विश्वविद्यालयले महसुस गरेको नै हो र महानगरपालिकाले रङ्गशाला बनाएर विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने आशामा पदाधिकारीहरुले रङ्गशालाका लागि जग्गा दिन अग्रसरता देखाएका होलान् !
अभियानमा सबैको साथ र सहयोग रह्यो भने असम्भव केही रहेनछ भन्ने उदाहरण धुर्मुस–सुन्तलीले यसअघि एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सरकारबाट भएका विकास निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र र ढिलासुस्तीमा पर्दै आएका छन् । एक जोडी कलाकारले देखेको सपना साकार बनाउन, थप आँट र हौसला प्रदान गर्न देशविदेशमा रहेका मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन् । एक जोडी कलाकारको अभियानबाट चार अर्ब रूपैयाँ आर्थिक संकलन गरेरै रङ्गशाला बनाउने संकल्प गर्नु आफैँमा ठूलो दुस्साहस मान्नुपर्छ । सरकारले चाहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने होइन, तर विडम्बना ! देशमा सरकारले कलाकारिता र कलाकारले सरकारको काम गर्नु परेको छ ।
चितवनमा रङ्गशाला बन्दा त्यसले पर्यटकहरुको आकर्षण बढाउनेछ, जसले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन थप बल पुग्नेछ । चितवन र देशकै जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । हामी सबैले धुर्मुस–सुन्तलीको यो अभियानसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेर साथ अनि सहयोग गरे अबको १ वर्षमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान हुनेछ । नेपाली क्रिकेट विकासको एक प्रभावकारी माध्यमका रुपमा यसलाई पनि लिन सकिन्छ, जहाँ नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानका खेल नेपालले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट खेलाएर मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
रङ्गशालाको बहुआयामिक मह¤व छ । हामी सबै जुटे देश बन्छ । हामी नागरिकको दायित्व सरकारलाई गाली गर्नेमात्र होइन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्ने पनि हो । सके धनले सहयोग गरौँ, नसके मनले सहयोग गरौँ । रङ्गशाला निर्माणको सपनालाई साकार पारौँ । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउने क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान स्वागतयोग्य छ । कसैले यसलाई नकारात्मकरुपमा बुझ्छ भने त्यो केवल कमजोर मानसिकताको उपज हुनेछ । यो अभियान सफल हुनैपर्छ ।